देउवालाई ओली विरोधीहरुबाट प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव « रिपोर्टर्स नेपाल
(Friday 5th March 2021)
काठमाडौं, २ माघ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई शर्तसहित प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पुगेको छ । उनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै क्षेत्रबाट प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पुगेको हो ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार देउवा संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिएमा प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गर्ने प्रचण्ड, माधवकुमार नेपालका अलावा अन्य शक्तिशाली नेताहरुले पनि गरेका छन् । यसै हप्ता देउवालाई भेटेका प्रचण्ड र नेपालले संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिएमा प्रधानमन्त्री बन्न सघाउने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
देउवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भित्री रुपमा मिलेको चर्चा चलिरहेपछि प्रचण्ड र नेपालले नयाँ कार्ड फालेका हुन् । बरु देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न साथ दिने गरी संसद पुनःस्थापनामा लाग्ने उनीहरुको रणनीति देखिएको छ । देउवाले पछिल्लो समय अदालतको आदेश पर्खने जवाफ दिदै आएका छन् । तर, घुमाउरो पाराले उनले संसद विघटनको पक्ष लिएर मध्यावधि चुनावको तयारीमा लाग्न जोडबल गरिरहेका छन् ।
यसैगरी, राष्ट्रिय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पुगेको संकेत गरेका छन् । उनले अबको प्रधानमन्त्री देउवा बन्ने आँकलन गरे । गृहजिल्ला गोरखा पुगेर उनले सरकारको नेतृत्व गर्ने पालो काँग्रेसको भएको र देउवाकै पालो आउने अनुमान गरेका हुन् । यो संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा एकजुट भएर जाने र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी तयार गरिएको रणनीतिको संकेत पनि हो ।
संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा देउवा आएमा अदालतमाथि पनि दबाब बढ्ने विश्लेषण भइरहेको छ । अर्कोतर्फ, अदालतले जेसुकै फैसला गरेपनि देउवा पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिए सडक आन्दोलनबाट सफलता हासिल गर्न सकिने बुझाई उनीहरुको छ । काँग्रेसभित्र रामचन्द्र पौडेल संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा स्पष्ट रुपमा उभिएका छन् । देउवा भने चुनावमा जान आतुर छन् । देउवालाई प्रधानमन्त्री दिने गरी फकाउन नेताहरु सक्रिय भएका छन् ।-फाइल तस्बिर
बामदेवले राजीनामा दिनुहोस् भन्दा ओलीको जवाफः मेरो कुर्सी ताक्नेलाई भन्नुहोस्
काठमाडौं, २१ फागुन । ‘तपाईं राजीनामा दिएर पार्टी एकता बचाउनुहोस् !’ भैंसेपाटीस्थित निवासमा भेट्न पुगेका
विष्णु पौडेललाई ढल्दै गरेको सरकारको मन्त्रीको संज्ञा दिँदै घनश्यामले भने- हिसाबकिताब हुने नै छ (विज्ञप्तीसहित)
काठमाडौं, २१ फागुन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल-नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य तथा सांसद
ओलीले बामदेवलाई भैंसेपाटी पुगेर किन भेटे ?
काठमाडौं, २१ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई भैंसेपाटीस्थित
निर्वाचन आयोगले कस्को पक्षमा निर्णय देला ?
काठमाडौं, २१ फागुन । निर्वाचन आयोगमाथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिकतबारे छिट्टै निर्णय दिन दबाब बढिरहेको
प्रधानमन्त्री ओलीलाई कांग्रेसको प्रश्न : राज्यलाई हतियार बुझाउने चौथो बुँदा खोई ?
काठमाडौं, २१ फागुन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार र विप्लवबीचको सहमतिमा हतियार बुझाउने
विप्लव समूह ओली सरकारमा जाने
काठमाडौं, २१ फागुन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूह सरकारमा जाने भएको छ । आजै
सहमति पत्रमा हस्ताक्षर, प्रधानमन्त्री ओली र विप्लव एउटै मञ्चमा उभिँदा जे देखियो (फोटोफिचर)
काठमाडौं, २१ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दका
आज १ सय २० संक्रमित थप
काठमाडौं, २१ फागुन । नेपालमा कोरोना भाइरसका आज १ सय २० जना संक्रमित थपिएका छन्
वामदेव फकाउँदै प्रधानमन्त्री ओली, विश्वासिला नेताहरुसहित भैंसेपाटी पुगे
काठमाडौं, २१ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आकस्मिक रुपमा वामदेव गौतमलाई भेट्न भैंसेपाटी पुगेका